I-Sweet Natura Place Bela Vista, Albufeira - I-Airbnb
I-Sweet Natura Place Bela Vista, Albufeira
Albufeira, Faro District, i-Portugal
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Joao
Ngo-213 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
Charming studio efulethini ilungele abantu ababili.
Ibheke eningizimu, I-Swimming pool, singabona ulwandle buqamama ukusuka kuvulandi
Indawo yokupaka mahhala emgwaqeni, phambi kwendawo yokuhlala
Itholakala maphakathi ne-Albufeira ebangeni elingu-1 km ukusuka ogwini kanye nedolobha elidala
Isitudiyo esihle esigcwele ukuthandeka esinamachibi okubhukuda, abheke eningizimu
Isitudiyo esihle kakhulu endaweni yokuhlala enechibi lokubhukuda, i-balcony, i-inthanethi ye-WiFi esheshayo nengenamkhawulo. Ihlotshiswe kahle, yesimanje, ivulekile, ikhululekile, itholakala ku-1 km ukusuka ogwini kanye nedolobha elidala, elibheke eningizimu
I-Bela Vista iyinkimbinkimbi enhle evumela ukufinyelela kalula kuzo zonke izinsiza.
Ifulethi lakhiwe ngo-Okthoba 2021, lifaneleka kahle abantu abangu-2, uhlobo lwesitudiyo olunompheme omncane omuhle, luqukethe ikamelo elikhulu, umbhede ongu-160x200, ikhishi, elinefenisha futhi linempahla, yokugezela.
Inkonzo yamabhasi yasendaweni (Giro) ima cishe ngaphambi kwefulethi, ima njalo ngemizuzu engama-30 futhi izonisa nobabili enkabeni yedolobha elidala nasebhishi.
Idolobha elidala kanye ne-back pescadores beach 1km
Isiteshi sebhasi 1 km
Amathilomu, izindawo zokudlela, umtholampilo wabacwali bezinwele njll. 100 metres.
Isuphamakethe 100 amamitha
I-Algarve ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi eYurophu. Kukhona okuthile kwawo wonke umuntu, ngamabhishi amahle anesihlabathi, impilo yasebusuku enempilo nenala yezindawo zokudlela namabha. Nakuba iningi labantu livakashela ehlobo, liyaduma nangenkathi yasebusika ngenxa yesimo sezulu esipholile. Iyipharadesi yegalofu njengoba inezinkundla zegalofu ezidume kakhulu emhlabeni.
I-Algarve nayo igcwele amabhishi anesihlabathi amahle nahlanzekile, noma ngabe ukhetha indawo emide yesihlabathi enezindawo eziningi zemidlalo noma ama-cove amancane angasese ngokuqinisekile ngeke udumale. Ezinganeni, unezikhungo ze-Slide ne-Splash, i-Aqualand ne-Zoo Marine eqhele ngemizuzu engu-20 nje ngemoto.
Umbhede omkhulu ongu-1, Umbhede wengane e-1, imibhede yenetha engu-1
I-wifi esheshayo – 213 Mbps
Inombolo yepholisi: 120835/AL